Ethiopia oo cadeeysatay taagerada ay u hayso Madaxweyne Xasan Sheekh | Kobciye24.com
Ethiopia oo cadeeysatay taagerada ay u hayso Madaxweyne Xasan Sheekh
Dowlada Ethiopia ayaa shaacisay taageerada ballaaran ee ay u hayso madaxwenaha iminka kasii dagaya talada dalka HSM kaasi oo afartii sano ee lasoo dhaafay hayay talada wadaka.
Raysalwasaaraha wadanka ethiopia ayaa shaaca kaqaaday in uu taageero ballaran siinayo xasam sheikh si uu talada ugu soo laabto isbuuca soo aadan taasi oo kadhigaysa ethiopia inay dano badan ku qabto kulaabashada talada dalka ee #HSM.
Madaxweyne Xasan ayaa waxaa la xasuustaa inuu tagay magaalada Jigjiga kaasi oo sheegayay in Dhulka ismaamulka Somalida uu yahay dhul ay leedaday dowalda ethopia, waxana intaasi uu ku daray in uu qalad ahaa dagaalkii somalia iyo ethiopea sanadii 1977.
Arimahan oo dhan ayaa keeni kara taageero ithiopia ay siiso madaxweynaha haatan kasii dagaya talada dalka.
Faduma Dayib oo doonaysay inay u cararto xilka madaxnimo hasa yeeshee aan kasoo muuqan liiska musharixiinta is diiwaan galiyay ayaa waxa ay barteeda twitterka kusoo daabacday in dhibaatada wadanka aysan ahayn argagaixiso hasa yeeshee ay tahay inuu talada kusoo laabto XSM waa sida ay hadalka u dhigtaye.
Somalia ayaa wajahaysa isbadal siyaasadeed week kadib markii ay kala cadaato cida guulaysata hasa yeeshee xaalada siyaasadeeed ee dalka ayaa sii ahaanaysa sida haatan ay tahay hadii uu guulayso madaxweynaha talada kadhamaatay.
Dadka falanqeeya siyaasadda somalia ayaa qaba in wadanka uusan xiligan u baahnayan #XSm hasa yeeshee uu doonayo isbadal taasina ay ku iman karto waji cusub oo dalka haga.
waxay intaasi ku darayaan dadkani in xsm uu iska horkeenay beelaha walaalaha ah ee daga Mudug kuwaasi oo dagaalo qaraar ku waayay dad farabadan.
dhanka kale waxa iyana jira in dagaalo ay kadhaceen magaalada marka kuwaasi oo beelaha daga ku wayeen dad ku qaali ahaa waliba aysan helin faragalin dag dag ah oo ay dowladu sameeso.
ugu danbayn afarta sano ee soo socota hadii uu dalka helo waji cusub waxa laga filan karaa horay socod wanaagsan iyo shaqo abuuris dhalinyaro taasi oo sanadadii dhamaaday aysan helin dhalinyarada.